Golaha Wasiirada ee DFS oo shir xasaasi ah ku leh Muqdisho.
Muqdisho:-Golaha Wasiirada DFS ayaa haatan waxaa uu kulan xasaasi ah ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaana uu kulanka uu ka socdaa Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha DFS waxaana kulanka ku sugan wasiirada DFS ee dhawaan uu isku shaandheeyey Raisulwasaare Cabdiweli.
Kulanka ay leeyihiin golaha wasiirada DFS ayaa waxaa shir gudoominaya Raisulwasaaraha DFS Cabdi weli Sh Maxamed warar aan wili la xaqiijin ayaa sheegaya in qaar ka mid ah golaha wasiirada ee la isku shaandheeyey ay doonayaan in ay xilka la kala wareeegaan.
Kulanka oo goordhow soo idlaaday ayaa waxaa saxaafada looga yeeray xafiiska Raisulwasaarha DFS Cabdiweli Sh Maxamed. Madaxweynaha DFS Xasan Sh Maxamuud ayaa shalay soo saaray warsaxaafadeed uu ku diidan yahay isku shaandheynta uu sameeyey Raisulwasaare Cabdi weli isaga oo ku tilmaamay mid dustuurka khilaafsan.